Global Voices teny Malagasy » Blog action day 2009: Miresaka momba ny fiovaovan’ny toetr’andro ireo tetikasa vatsian’ny Rising Voices · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Oktobra 2009 8:53 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Cote d'Ivoire, Madagasikara, Rising Voices
Androany [15 oktobra] no Blog Action Day  ary kendren'ity hetsika isan-taona ity ny hanambarana ny mpamaham-bolongana manerantany hanoratra lohahevitra tokana mba hampahafantarana sy hanentanana izao tontolo izao hiresaka ilay lohahevitra. Misy amin'ireo mpikambana ao amin'ny Rising Voices ary no nandray anjara tamin'ity hetsika ity ka entinay aminareo etoana ny fantina avy amin'izany.
Iray amin'ny tanjon'ny FOKO  izay vatsian'ny Rising Voices ny hahatonga ny ny olom-pirenena eto Madagasikara ho singa miasa eo anivon'ny tontolo ny [maitso] manokana izay ahiana [ho potika]. Tahina avy ao amin'ny FOKO Blog Club  eto Antananarivo, Madagascar no manoratra :
Androany no Blog Action Day  momba ny fiovaovan'ny toetr'andro, bolongana anarivony no manao soroka miara-milanja amin'izany mba hanaitra sy hanery ny tsirairay sy nympitondra eto amin'izao tontolo izao handray haingana ny andraikitra mety sy mifandraika amin'izany. Misy lanjany lehibe ity tolona ity rehefa zary lasa tsy fantatra intsony izay ho avin'ny taranaka. Tsy dia manantena loatra ny fiantraikany mivantana avy amin'ny fahazotoana an-tserasera toy itony aho raha ny eto Madagasikara saingy rehefa nahita ny fomba nanampian'ny famahanam-bolongana an'i Kamba  aho dia nanao hoe nahoana kosa moa no tsy ho tahaka izany koa amintsika. Te-hilaza amin'izao tontolo izao isika fa hitandrina.
Lyva, mpikambana hafa ay ao amin'ny FOKO no manoratra  [fr] avy any Antsirabe :
Ariniaina no miteny  izay tokony hataon'ny olona tsy hamotehana ny tontolo iainana:
Théophile Kouamouo avy amin'ny Abidjan Blog Camps  tetikasa Ivoariana no manoratra ny resadresaka nifanaovany  tamina mpanao politika Ivoariana 70 taona:
Manoratra  [fr] i Cartunelo avy amin'ny Abidjan Blog Camps :
Ny adihevitra momba ny fiovaovan'ny toetr'andro manokana moa dia natsangan'ny iray hafa vatsian'ny Rising Voices. Nomad Green  no mitarika ny olo-pirenena Mongol hanapariahana ao an-teorana sy ivelan'ny firenena ny olan'ny tontolo iainan'ny fireneny. Vakio ny bolongany  hahalalanao ny fahavitrihany hampiatoana ny fiharatsian'ny tontolo iainana ao Mongolia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/10/21/3926/
 no manoratra: http://r1lita.wordpress.com/2009/10/15/for-me-for-you-for-us/
 no manoratra: http://translate.google.com/translate?u=http%3A//lyva.wordpress.com/2009/10/15/changement-climatique-de-la-solution-depend-l%25E2%2580%2599avenir-de-l%25E2%2580%2599humanite/&hl=en&langpair=auto%7Cen&tbb=1&ie=utf-8
 no miteny: http://ariniaina.wordpress.com/2009/10/15/climate-change-whose-fight-is-this/
 Vakio ny bolongany: http://www.nomadgreen.org/